Ma rakibi Yosemite laakiin markaas ogaaday, in aan lagu ciyaari karo qaar ka mid ah warbaahinta aad files ee QuickTime mar dambe? Oo weliba aragnay in degsado Perian si ay u kordhiso QuickTime si ay u taageeraan qaybood oo codecs kale kaliya aan macquul yahay? Waa hagaag, waxaad u leedahay in aad ogaato in QuickTime ee plugin Perian ma hayo iyo Abuuraha reer alaabta, oo sidaas daraaddeed helo kale oo kale u ciyaaro on Yosemite yahay habka keliya ee aad halkan ku leeyihiin.
Nasiib wanaag, waxa jira laba kale Perian waxaad isticmaali kartaa Yosemite. Kale ugu horraysa ee aad isticmaali kartaa adiga oo isticmaalaya waa ciyaaryahan desktop video ah. Iyada oo ay taasi, waxa aad awoodi kartaa in ay la ciyaari .mkv, .avi, .wmv, iyo qaab kale oo file warbaahinta on Yosemite. Oo mid kalena wuxuu ku ag taal diinta files warbaahinta in qaabab in ay yihiin kuwo la socon kara ama playable on QuickTime sida .mov ama qaab .mp4, waxan u samaynaysaan kuu ogolaaneysaa in aad ciyaari kasta video ama Cajalado ku QuickTime. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato in marka aad badalo videos, waxa aad awoodi kartaa inaad ku isticmaasho on software Apple sida iDVD iyo iMovie.
Xalka 1: Isticmaal Video Desktop ah Player
Xalka 2: Beddelaan Your Videos soo Gudbiyay Qaabka Taasi la jaanqaadaan QuickTime
Xalka 3: Beddelaan Your Videos soo Gudbiyay Qaabka leh An Online Free Video Converter
Waxaad awoodaa inuu ciyaaro wax videos on Yosemite iibsan rakibidda a video ciyaaryahan non-app sida kaliya ciyaaryahan Wondershare . Ma aha in aad walwalo aan awoodin inuu u ciyaaro aad videos aan Perian sida aad mar walba soo bixi kartaa oo rakibi ciyaaryahan Wondershare si aad u computer lacag la'aan ah inuu u ciyaaro videos on Yosemite. Waa mid aad u fudud in ay si isticmaali uma baahnid inaad wax laga walwalo waxaa la adag. By isticmaalayn kale oo weyn oo ay ku Perian, waxaad isticmaali kartaa Yosemite si sax ah.
Habkani ma aad uma baahna in ay sameeyaan wax download ama la rakibo si aad Mac. All inaad samayso waa si loogu badalo aad video files in qaab kasta oo jaanqaadi iyo playable on QuickTime. Si taas loo sameeyo, kaliya dejisan iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate for Mac in aad Mac iyo bilowdo diinta. Wondershare Video Converter Ultimate Kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo audio iyo video labada in a QuickTime qaab socon sida .mov; taas oo ka dhigaysa waxaa suuragal ah in aad u ciyaaro aad files warbaahinta in Yosemite iyadoo wax dhibaato ah.
Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate si ay u sameeyaan shaqada Yosemite waa mid aad u fudud, oo ay tani tahay sida aad u samayn.
Tallaabada 1 Import Files Media in ay Wondershare Video Converter Ultimate
Kadib markii ay Wondershare Video Converter Ultimate ah, kaliya aad u jiitami karto files warbaahinta ka halkaas oo la badbaadiyey iyo hoos barnaamijka. File ayaa markaas ku bilaaban doono uploading in software ah.
Tallaabada 2 Dooro QuickTime .MOV Sida Qaabka Output
Waxaa la og yahay in .mov jaanqaadi iyo playable in QuickTime, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah si ay u doortaan sida qaab wax soo saarka. Si taas loo sameeyo, kaliya aad u leeyihiin in ay guji qaab icon ee qaybta hoose oo ka mid ah software iyo liiska qaab doorasho ka muuqan doontaa, oo ka dibna tag "Video" category iyo dooran .mov.
Tallaabada 3 Beddelaan File Warbaahinta
Simple riix "Beddelaan" button in qayb ka mid ah xaq ugu hooseysa Wondershare Video Converter Ultimate ah, qaab beddelidda Markaasaad bilaabi doonaa.
Halkan waa hab sahlan halkan. Isku day this video online Converter oo lacag la'aan ah oo aad ka heli kartaa file ka badaley daqiiqadii ah.
Sida loo isticmaalo FLV Grabber
Sida loo Encode AVI Faylal ay la AVI Encoder
Spotify for Blackberry: raaxaysta Spotify ee BlackBerry nooc kasta
Sida loo Beddelaan wmv in MKV
> Resource > Beddelaan > Hel Best Perian Alternative for Yosemite